iOS 11.1.2 အမှားကြောင့် iPhone နှင့် iPad ပျက်စီးသွားသည် iOS 11.2 သို့အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 11.1.2 အမှားကြောင့် iPhone နှင့် iPad ပျက်စီးသွားသည် iOS 11.2 သို့အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
Si သင် iOS 11.2 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသေးပါ၊။ ထို့အပြင်သင်သည်ဒေသခံအသိပေးကြေငြာချက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသောသူများအနက်အက်ပဲလ်မိုဘိုင်းနှင့်အိုင်ပက်ဒ်များကိုပါ ၀ င်စေခြင်းဖြစ်သည် ကွင်းဆက် စဉ်ဆက်မပြတ်သော့ခတ်။ သူတို့ကနေထောက်ပြအဖြစ် Macrumors, သြစတြေးလျရှိ Apple Stores သည်ပြexperienနာကြုံနေရသောသုံးစွဲသူများထံမှထောက်ခံမှုများစွာတောင်းဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါပြproblemနာကို install လုပ်သောအသုံးပြုသူများကိုထိခိုက်ရန်သက်သေပြနေသည် iOS ဗားရှင်း ၁၁.၁.၂ သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်။ ထို့အပြင်အရာရာတိုင်းကိုစတင်သည့်အချိန်အတိအကျရှိသည်။ ဒီဇင်ဘာလ 12.15 ရက်နေ့တွင် 2:XNUMX pm တွင်။ ထိုအချိန်ကတည်းကဒေသခံသတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိသူအားလုံးသည် network ပေါ်ရှိပြproblemsနာများအထူးသဖြင့် terminal crash နှင့်အမြဲတမ်းကျရှုံးမှုများဖြစ်သည်။
Reddit ဖိုရမ်အသုံးပြုသူများကိုရှာတွေ့ခဲ့သည် ဖြေရှင်းချက်များရောက်ရှိစဉ်ခေတ္တသည်ဤအသိပေးချက်ကို disable အားဖြင့်ဖြေရှင်းချက်။ အခြားသူများကမူသူတို့၏ကွန်ပျူတာများ၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုပြုပြင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ iPhone ကိုလှည့်စားခြင်းဖြစ်သည် 2:12.15 pm မှာဒီဇင်ဘာလ XNUMX ၏အစောပိုင်းရက်စွဲကိုညွှန်ပြ။ ဤနောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကို Apple အထောက်အပံ့ဝန်ထမ်းများကပေးခဲ့သည် ထို့အပြင် application များကို uninstall လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။
တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းမှ Apple ထံမှလာပြီးမကြာမီတွင်၊ iOS 11.2 ကအရာအားလုံးကိုပြုပြင်တယ်သူတို့မှတ်ချက်ချအဖြစ်။ ထို့ကြောင့်၊ ဗားရှင်းအသစ်၏တိုးတက်မှုများရရှိခြင်းအပြင် (Apple Pay Cash ကိုသင်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သာယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်သည် - သင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့် Apple Pay မှတစ်ဆင့်ငွေကိုလက်ခံရန်၊ ပေးပို့ရန်နှင့်တောင်းခံရန်အတွက် Apple Pay ငွေ၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာတို့အတွက်)၊ ဒါ့အပြင်ဒီ fix ကို ကြမ်းပိုး iOS 11.1.2 မှဖြစ်သည်.
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် iOS 11.2 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသေးပါကဤမအောင်မြင်မှုများကိုကြုံတွေ့ရလျှင် ((ဒေသဆိုင်ရာသတိပေးချက်များကြောင့်ထိခိုက်သောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ), သင်ဗားရှင်းအသစ်ကဖြေရှင်းနိုင်သည်ကိုသင်တို့သိ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 11.1.2 အမှားကြောင့် iPhone နှင့် iPad ပျက်စီးသွားသည် iOS 11.2 သို့အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ iPhone6Plus သည် iOS 11.0 (15A372) တွင်အခက်အခဲမရှိဘဲရှိနေပါသည်။
Rubén, ငါတို့ဒီဇင်ဘာလ၌ရှိကြ၏။ ပြနာကိုဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ နို ၀ င်ဘာ ၂ ရက်မ ...
Ruben Gallardo ဟုသူကပြောသည်
လုံးဝမှန်တယ်၊ ဒေးဗစ်။ အနည်းငယ်စလစ်။ အသိပေးစာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Ruben Gallardo အားပြန်ပြောပါ
Chacaltana မှ Ana Mari ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်ုပ်တွင်ဗားရှင်း ၁၁.၂ ထည့်သွင်းထားပြီးပြproblemsနာများသည်ယနေ့မနက် ၆ နာရီတွင်ဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းရှိပါသည်။ ဖြေရှင်းနည်းများလား။
Chacaltana ကို Ana Mari သို့ပြန်သွားပါ
ငါမွမ်းမံပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့်မိုင်းပြtheနာကမနေ့ကတတိယအကြိမ် ၁၂း၁၅ နာရီမှာမှစခဲ့တယ်။
cali အတွက်ဟိုတယ်များ ဟုသူကပြောသည်
ထို bug ကိုပြုပြင်ရန်တာ ၀ န်ရှိသောဆင်းရဲသောအိုင်တီပညာရှင်များ
Marcela gonzalez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ပြproblemနာကနောက်တစ်နည်းပေါ့။ ငါ့မှာ iPhone SE နဲ့ iOS11.2 ရှိတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ၁၂/၃ ကတည်းကငါ့ကိုချိတ်ဆွဲပြီးစကားဝှက်ကိုအမြဲတောင်းတယ် !! ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
Marcela Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
ယေရှု ARROYO DIARTE ဟုသူကပြောသည်
ယနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့၌အခက်အခဲများရှိနေဆဲ၊ အဆက်မပြတ်ပြန်လည် reboot လုပ်ခြင်းကြောင့်ပြproblemsနာများစွာနှင့်ဗားရှင်းအသစ်များသို့ကျွန်ုပ် update လုပ်ပြီး၊ ထိုနေ့မတိုင်မီကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြသနာအမျိုးမျိုးရှိသည်၊ အချို့သည်ကျွန်ုပ်၏ bluetooth ထုတ်ကုန်များနှင့်ပြproblemsနာများဖြစ်သည်။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ အဝင်ခေါ်ဆိုခြင်း၊ ဖုန်းနှေးခြင်းနှင့်ဖုန်းကိုပိတ်ထားရန်အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းကြောင့်ပြန်ဖွင့်ခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ Apple နည်းပညာအထောက်အပံ့ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ နေရာတိုင်းမှာသူတို့ဟာ update အသစ်တစ်ခုကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြောင်းပြသနေတဲ့ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့၎င်းသည် iphone7ဖြစ်ပြီးဗားရှင်း 11.2.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှမလိုချင်ဘူး၊ ကူညီမှုတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီမှတ်ချက်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုတွေအများကြီးနဲ့ရေးသားခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
JESUS ​​ARROYO DIARTE သို့ပြန်ပြောပါ
HEX သည် Star Wars iPhone အမှုအသစ်များကိုစတင်ခဲ့သည်
iOS 11.2 နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုလူတိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်သည်